P2 LED Pixel Pitch Indoor LED Miseho ho an'ny fihaonambe
Sehatra anatiny, studio TV, kaonseritra, valan-javaboary, Fampisehoana an-tsehatra, hetsika mivantana, trano heva Dj ho an'ny trano fandihizana, kaonseritra, fety, hetsika komana, varavarankely na fampirantiana fivarotana, fihaonambe, sehatra an-tsehatra ary toerana hafa hanaovana dokambarotra sy fialamboly.
1. Mahatratra 3840HZ ny tahan'ny fanavaozana avo lenta. Miaraka amin'ny IC tsara kalitao tsara indrindra, dia afaka mampiseho aminao ny vokany tsara indrindra amin'ny maso.
2. Tsy mila manala ny lafiny aoriana amin'ny tontonana hisolo ny modely notarihina.
3. Ny kabinetra aluminium manary Die dia mahatonga ny kabinetra tokana hazavana tahaka ny 8KG.
4. Ny sarontava natao manokana dia afaka manao ny zoro mitsivalana hatramin'ny 140 degre.
5. 500mmx500mm sy 500mmx500x1000mm dia afaka mampifangaro ny fampiasana, mety ho azonao ampiasaina amin'ny hetsika samihafa.
6. Miaraka amin'ny hazavana manitsy ny hazavana mamirapiratra sy ny famatsiana herinaratra PFC, ny onja ambany dia afaka mamonjy angovo mihoatra ny 35%, midika izany fa mitahiry vola 35%.
Miaraka amin'ny haitao fampiratiana LED sy ny filan'ny tsena fampiroboroboana tsy mitsaha-mitombo, ny pixel kely pixel P2mm ao anaty trano dia manjary malaza ankehitriny. Ny fampisehoana LED LED ao anaty anaty trano dia ny fisehoana LED pixel kely indrindra ao amin'ny tsena fampisehoana raikitra anatiny. P2mm Indoor SMD LED Display dia natao manokana ho an'ny famaritana avo lenta sy fampiasa avo lenta izay ny efijery dia mila mampiseho sary sy horonantsary mazava kokoa ho an'ny mpijery, Miaraka amin'ny fiasa amin'ny haavon'ny haavo isaky ny metatra toradroa sy ny tsipika 2.0mm ary ny elanelana amin'ny tsanganana, P2 fampisehoana LED raikitra no misafidy voalohany raha ilaina ny fenitry ny horonantsary HD amin'ny fampiharana anaty trano. ary izy io dia be mpampiasa amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fanaraha-maso, efitrano fanaraha-maso, na toerana misy toerana mifanohitra be, ilaina ny mijery akaiky.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny tabilao fampirantiana P2 ao anaty trano ao anatiny dia tonga hatrany amin'ny lohalaharana ary manjaka amin'ny tsena fampiratiana LED arakaraka ny hatsaram-panahy miavaka, ny avo lenta, ny fahamendrehana avo lenta, ny fahamendrehana avo lenta ary ny fahitana tena tsara hiaina.
miaraka amin'ny fifehezana famokarana henjana sy fitaovana avo lenta LED, ny famantarana P2mm LED antsika dia afaka manolotra vahaolana avo lenta avo lenta momba ny fampisehoana HD, manome ny vokany hita maso sy mazava. ary bebe kokoa, LED SMD2020 mainty avo lenta mba hahazoana antoka fa ny efijery LED P2mm ao anaty trano dia manana fifandanjana fotsy lehibe na dia eo amin'ny tontolo semi-ivelan'ny trano aza. Ankoatr'izay, ny famolavolana kabinetra matihanina sy ny famolavolana angovo tena mahomby mba hahatonga ny P2 LED LED sign tsy manam-paharoa, milamina ary tena mangina. Ho fanampin'izany, ny rafitra fanaraha-maso fampiasa LED manerantany dia ampiasaina hanamboarana ny efijery LED P2mm ao anaty trano ho mora sy asa fitantanana votoaty mahery. Ankoatr'izay, ny tetikasa fanaraha-maso matotra isan-karazany dia nanatsara ny fisehoan'ny P2 LED fisehoana an-tsehatra ary mihamaro hatrany ny mpanjifa mifidy anay ho mpamatsy sy mpamatsy marika LED P2 anaty trano maharitra. Voninahitsika izany ary koa antony manosika ho anay, tahaka ny mahazatra hatrany, ho an'ireo mpanjifa vaovao sy taloha rehetra izay misy vokatra sy serivisy fampisehoana LED pixel kely P2 anatiny ao anaty.
tongasoa anao hianatra bebe kokoa momba ny fisehoana tariby LED P2 ao anaty trano
Ny tanjaky ny orinasanay.
Amin'ny maha orinasa teknolojia avo lenta miaraka amin'ny fikarohana siantifika, famolavolana, famokarana, fikojakojana, fivarotana ary fampidirana ny rafitra, i Shenzhen Eachinled Optoelectronics Co.Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny efijery fampiratiana LED. Manana ekipa matihanina teknika avo lenta R & D mirotsaka amin'ny R & D amin'ny vokatra teknolojia avo lenta izahay mandritra ny taona maro miaraka amin'ny tanjaka ara-teknika matanjaka. Manana injeniera za-draharaha maro manan-karena koa izahay ary injeniera momba ny famolavolana ny vokatra matihanina. Miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fitsapana ary ekipa mpivarotra tena tsara sy mpiara-miasa amin'ny fantsona dia mitantana ny fanitarana ny tsena sy ny serivisy aorian'ny fivarotana amin'ny ankapobeny izahay.
1) Fiofanana aorian'ny filaminana
Aorian'ny fametrahana ny kaomandy dia hisy ny fampiofanana aroso, anisan'izany ny fampiasana lozisialy, fiarovana ny fiarovana, fitazonana fitaovana
2) Fametrahana sy fanafoanana
Wecould dia handefa matihanina hitarika amin'ny fametrahana tranokala sy ny debugging mifanaraka amin'ny fepetra takian'ireo drafitra sy ny boky torolàlana.
Warranty: Warranty 3 taona, fikojakojana mandritra ny androm-piainana
Ampiaraho amin'ny kojakoja fanampiny. Ny 2 taona voalohany aorian'ny fandefasana azy dia tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana maimaimpoana izahay raha misy olana ateraky ny kalitao. Na dia tokony hitondra anay ny vidin'ny entana aza ianao. Aorian'ny 2 taona, mbola misy ny serivisy, nefa kosa handoavana ny vidin'ny asa, ny fitaovana ary ny entana izay miteraka.
Fitsipika fikojakojana: valiny ara-potoana, famahana olana haingana ary omeo antoka ny fampiasana azy.
Fotoam-pikojakojana: Amin'ny vanim-potoana fikojakojana ny vatan'ny fampisehoana tarihina, tsy misy fiampangana fikarakarana rehetra
Aorian'ny fotoana fikojakojana dia alao ihany ny vidin'ny fitaovana sy ny vidin'ny asa.
P0.9 P1.25 efijery rindrina LED ao anaty trano
P2.5 Indraindray LED Video Wall